China Electric Lunch Box ifektri abakhiqizi | Ukuncibilikisa
Amandla (ubuningi) 300W
Ubukhulu 220 * 127 * 140mm
Ubukhulu Ukupakisha 755X 575X 300mm (16PCS / ibhokisi)
Isisindo sengqikithi 840g
Ubude bezintambo zamandla 0.75m
1.Ukufana kokushisa, gcina ukunambitheka okuhle.
Idizayini eyingqayizivele nethuthukisiwe yokushisa iqinisekisa ukuthi ukudla kwakho kufudunyezwa ngokulinganayo, futhi usengakujabulela ukudla okunambitheka okuhle kwasekuqaleni.
Ibhokisi lesidlo sasemini likagesi lingahlukaniswa ngehhavini le-microwave, ibhokisi lesidlo sasemini, umpheki welayisi kagesi, uhhavini wokuthosa, imbiza yesobho, ibhodwe lokubhodla, ukuma komzimba okuncane, njengokudla okuhle ehhovisi noma ekhaya.
3. Ukushisa Ukushisa Okufanayo
Akuhlanganisi nomphunga wamanzi ukukhipha iphunga eliyihlazo. Ukushisa okufana nokushisa kufaka indawo yokushisa okusheshayo kwe-microwave ukuvikela ukwakheka kokudla okunomsoco nokunambitheka okuhle.
4. I-liner ephezulu ye-aluminium alloy kanye ne-conductivity ephelele yokushisa
5. 800ml umthamo, ugcwalise ngalokho okuthandayo.
Ukuqina komoya okuphezulu, ukuvala okhiye kabili, ukukhiya zonke izikhathi zokushayisana kokudla.
6. Inqubo yokushisa ithule futhi ayiphazamiseki.
Isivalo ibanga lokudla le-PC yokumelana nokushisa okuphezulu, i-liner yenziwa ngebanga lokudla i-aluminium ceramic. Isibonakaliso sokukhanya okuholelekile, kulula kakhulu ukuhlola isimo sokupheka nganoma yisiphi isikhathi.
7. Isikhombi Magnetic, shushu uma uyixhume.
Akunasidingo sokulinda emgqeni wokushisa kwe-microwave, ungaba nokudla okufudumele ngesikhathi sokusebenza.
8. Kulula kakhulu futhi kuyaphatheka ukuphatha ukudla kwakho
Leli bhokisi linama-0.84KG futhi lilingana nebhokisi lengilazi lesidlo sasemini. Akunankinga ngokuvuza uma ukufaka esikhwameni.
9. Kugezwa ngokugcwele ukuze kuhlanzwe kalula
Ibhokisi lokudla lebanga langaphakathi le-ceramic kulula ukulihlanza futhi alinamatheli. Kuthatha kuphela 3mins ukugeza.
Langaphambilini Ibhokisi Lesidlo Sasemini Likagesi
Olandelayo: Imbiza yokupheka enemisebenzi eminingi
Ibhokisi Lesidlo Sasemini Esifudumele
Ibhokisi Lokushisa Likagesi
Ephathekayo Electric Heating Lunch Box